December 19, 2014 – democracy for burma
#BURMA #MYANMAR #first #Karen #police #officer in the #United #States.
Ler Htoo graduated on Thursday from the Police Academy in St. Paul Minnesota and becomes the first Karen police officer in the United States.
အမေရိကန်မှာ ပထမဦးဆုံး မြန်မာနိုင်ငံမှ ရဲအရာရှိဖြစ်လာတဲ့ စိန်ပေါလ် အကယ်ဒမီရဲအရာရှိ သင်တန်းဆင်း ကရင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်သူ စောလယ်ထူး!
On December 19, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
#ရက်နေ့ ဆုံဆည်းမြိုင်မှာအကြိုပုလုပ်နေတဲ့ #ကရင်နှစ်သစ်ကူးနဲ့ ဒီကေဘီအေ #တပ်မတော်နေ့မြင်ကွင်း(၁၉-၁၂-၂၀၁၄
On December 19, 2014 December 20, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
(၂၀-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့ ဆုံဆည်းမြိုင်မှာအကြိုပုလုပ်နေတဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်မတော်နေ့မြင်ကွင်း
မောင်မောင် (မြန်မာ) နဲ့ ကင်တွယ်ချ (ထိုင်း) တို့ ထိုသတ်တဲ့ပွဲပါ။ ဒိုင်က ဦးလယ်တောမောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ မောင်မောင် (မြန်မာ) ကအနိုင်ရသွားပါတယ်။
(၂၀-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့ ဆုံဆည်းမြိုင်မှာအကြိုပြုလုပ်နေတဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနဲ့ ဒီကေဘီအေတပ်မတော်နေ့မှ ဝေါ်လေမြို့နယ်ခွဲ နှင့်စုကလိ မြို့နယ်ခွဲမှ ကျောင်းသားလူငယ်အားကစား ဖွင့်ပွဲ
(၁၉-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့ ဆုံဆည်းမြိုင်မှာအကြိုပုလုပ်နေတဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်မတော်နေ့မြင်ကွင်း
လက်ဝှေ့ဒိုင်ကတော့ ဦးရွှေဝါထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ CR.Sanay Htun
#MYANMAR #BURMA #ACTIVIST #ARRESTED AS HE #SLEPT ON #STREET TO #PROTECT #PROTESTERS FROM #MICHAUNG #KAN CAMP
On December 19, 2014 January 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
KO WAI LU ARRESTED AS HE SLEPT ON STREET TO PROTECT PROTESTERS FROM MICHAUNG KAN CAMP
photocr.Win Ko Hlaing
photocr. KoMin MinZaw
#ဒ့က္ခရောက်တဲ့ ပြည်သူကိုေ#စာင့်ရှောက်ဖို့ လမ်းဘေးမှာ #သွားအိပ်လျှင် ဒီအစိုးရဖမ်းတယ်တဲ့ဗျာ မယုံမရှိနဲ့ ပြည်သူအတွက် အခန်းထဲက လုပ်နေသူတွ ကြည့်ထားပါ အဲဒါရာဇ၀င်ဘဲ။.
မိကျောင်းကန်းရေးကူညီနေသူကိုဝေဠုအားအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီး၍ပုဒ်မ၅၀၅ ခ ဖြင့်စွပ်စွဲထားမှုအပေါ်မိကျောင်းကန်အဖိနှိပ်ခံတွေရဲ့သဘောထား
မင်းဇော် CR. KoMin MinZaw
ဒ့က္ခရောက်တဲ့ ပြည်သူကို စောင့်ရှောက်ဖို့ လမ်းဘေးမှာ သွားအိပ်လျှင် ဒီအစိုးရဖမ်းတယ်တဲ့ဗျာ မယုံမရှိနဲ့ ပြည်သူအတွက် အခန်းထဲက လုပ်နေသူတွ ကြည့်ထားပါ အဲဒါရာဇ၀င်ဘဲ။……၀င်းကို CR.Win Ko Hlaing